Liverpool oo guusheedii labaad xiriir ah ee horyaalka Premier League ka gaartay Southampton … SAWIRRO – Gool FM
Liverpool oo guusheedii labaad xiriir ah ee horyaalka Premier League ka gaartay Southampton … SAWIRRO
(England) 17 Agoosto 2019. Kooxda Liverpool ayaa guul dirqi ah kala soo laabatay garoonka St. Mary’s., kaddib markii ay 2-1 kaga soo adkaatay Southampton, kulankooda labaad horyaalka Premier League ee xili ciyaareedkan 2019/2020.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hogaamineysay kooxda Liverpool.
Daqiiqadii 45-aad ee ku dhawaad dhamaadka qeybtii hore ee ciyaarta Sadio Mane ayaa hogaanka u dhiibay kooxdiisa Liverpool, wuxuuna dheesha ka dhigay 1-0., kaddib caawin uu ka helay waayeelka Reds ee James Milner.
Qeybta labaad marka dib leysugu soo laabtay kooxaha Southampton iyo Liverpool ayaa waxay sameeyeen qaab ciyaareed aad u fiican ee ku saleysnaa weerar iyo weerar celis, waxayna abuureen fursado dhowr ah ee loo filan karay goolal.
Daqiiqadii 71-aad Roberto Firmino ayaa hogaanka u sii dheereeyay kooxdiisa Liverpool wuxuuna dheesha ka dhigay 2-0.
Laakiin xiddiga kooxda Southampton ee Danny Ings ayaa daqiiqadii 83-aad ciyaarta ka dhigay 2-1.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 2-1, ay guusha ku raacday Kooxda Liverpool, waxayna awoodeen in saddexda dhibcood ay kaga soo qaataan Southampton garoonka St. Mary’s.
Shaxda rasmiga ah Manchester City Vs Tottenham ee kulanka xiisaha badan horyaalka Premier League
Horudhaca Chelsea vs Leicester: Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka maanta ee Premier League